Wardrobe - Omyanmar
> Household wear>Wardrobe
BRIM SLIDING 1 MIRROR DOOR WARDROBE
BW-02 Brim sliding mirror door wardrobe with3hanging rods and5compartments BW-02 Brim ဘေးဆွဲကြည့်မှန်တံခါး အ၀တ်အစားဗီရိုဖြစ်ပြီး၊ အတွင်း၌ အ၀တ်ချိတ်တန်း ၃ ခုနှင့် အကန့် ၅ ခုပါဝင်သည်။ Inside drawer with keylock ( optional for sale: BWD-01) ထို့ပြင်အတွင်း၌ သော့ခတ်နိုင်သည့်အံဆွဲတစ်ခုပါဝင်သည်။ (BWD-01 အား အပိုသီးသန့်ဝယ်ယူနိုင်သည်။)
2 door cupboard with3adjustable shelves and keylock. Recessed handle style. ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် စင်(၃)စင်နှင့် သော့ခတ်နိုင်သည့် နှစ်ဖက်ဖွင့်တံခါးဗီရို။ လက်ကိုင်အမြှပ်ပုံစံ တံခါးလက်ကိုင်။ Size: W91.4*D45.7*H182.9 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၉၁.၄၊ အနံ ၄၅.၇၊ အမြင့် ၁၈၂.၉ စင်တီမီတာ
Full height open door wardrobe with 1 hanging rod and2adjustable shelves. နှစ်ဖက်ဖွင့်တံခါးဗီရိုအမြင့်ဖြစ်သည်။ အ၀တ်ချိတ်တန်း (၁)ခုနှင့် ဖြုတ်တပ်အသုံးပြုနိုင်သော စင် (၂)ချပ်ပါရှိပြီး၊ သော့ခတ်နိုင်သည်။
Full height sliding door wardrobe with 1 hanging rod and2adjustable shelves and keylock. ဘေးဆွဲတံခါးဗီရိုအမြင့်ဖြစ်သည်။ အ၀တ်ချိတ်တန်း (၁)ခုနှင့် ဖြုတ်တပ်အသုံးပြုနိုင်သော စင် (၂)ချပ်ပါရှိပြီး၊ သော့ခတ်နိုင်သည်။
Full height sliding glass door wardrobe with 1 rod,2adjustable shelves and keylock. ဘေးဆွဲမှန်တံခါးဗီရိုအမြင့်ဖြစ်သည်။ အ၀တ်ချိတ်တန်း (၁)ခုနှင့် ဖြုတ်တပ်အသုံးပြုနိုင်သော စင် (၂)ချပ်ပါရှိပြီး၊ သော့ခတ်နိုင်သည်။
Open door wardrobe with 1 hanging rod and2adjustable shelves. နှစ်ဖက်ဖွင့်တံခါးနှင့် ဗီရိုဖြစ်သည်။ အ၀တ်ချိတ်တန်း (၁)ခုနှင့် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော စင်(၂)စင်ပါဝင်သည်။
Full height sliding door wardrobe with 1 hanging rod ,1 shelf and keylock. ဘေးဆွဲမှန်တံခါးနှင့် အ၀တ်အစားဗီရိုအမြင့်ဖြစ်သည်။ အ၀တ်ချိတ်တန်း (၁)ခုနှင့် စင် (၁)စင်ပါဝင်ပြီး၊ သော့ခတ်နိုင်သည်။ SIZE: W91.4*D56*H182.9 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၉၁.၄၊ အနံ ၅၆၊ အမြင့် ၁၈၂.၉ စင်တီမီတာ
Full height sliding glass door wardrobe with 1 rod and 1 shelf. (including base) ဘေးဆွဲမှန်တံခါးနှင့် အ၀တ်အစားဗီရိုအမြင့်ဖြစ်သည်။ အ၀တ်ချိတ်တန်း (၁)ခုနှင့် စင် (၁)စင်ပါဝင်သည်။ (အောက်ခြေပါဝင်သည်။)
Height sliding steel door wardrobe with 1 hanging rod and 1 shelf (including base) ဘေးဆွဲစတီးတံခါးနှင့် အ၀တ်အစားဗီရိုအမြင့်ဖြစ်သည်။ အ၀တ်ချိတ်တန်း (၁)ခုနှင့် စင် (၁)စင်ပါဝင်သည်။ (အောက်ခြေပါဝင်သည်။)
Full height open glass door wardrobe with 1 hanging rod and2adjustable shelves. နှစ်ဖက်ဖွင့်မှန်တံခါးနှင့် ဗီရိုဖြစ်သည်။ အ၀တ်ချိတ်တန်း (၁)ခုနှင့် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော စင်(၂)စင်ပါဝင်သည်။ Size: W91.4*D56*H182.9 cm.3type of glass available (mirror, frosted or normal ) (မှန်အကြည်၊ မှန်အနောက်၊ ကြည့်မှန်) တံခါးများရရှိနိုင်ပါသည်။
Full height2open glass door wardrobe with 1 hanging rod and 1 shelf. (including base) နှစ်ဖက်ဖွင့်မှန်တံခါး (၂)ချပ်နှင့် အ၀တ်အစားဗီရိုအမြင့်ဖြစ်သည်။ အ၀တ်ချိတ်တန်း (၁)ခုနှင့် စင် (၁)စင်ပါဝင်သည်။ (အောက်ခြေစင်ပါဝင်သည်။)
Height2open steel door wardrobe with 1 hanging rod and 1 shelf (including base) နှစ်ဖက်ဖွင့်စတီးတံခါး (၂)ချပ်နှင့် အ၀တ်အစားဗီရိုအမြင့်ဖြစ်သည်။ အ၀တ်ချိတ်တန်း (၁)ခုနှင့် စင် (၁)စင်ပါဝင်သည်။ (အောက်ခြေပါဝင်သည်။)